Man United oo guul ka gaartay kooxda Hull City, lugta hore ee afar dhammaadka League Cup… + SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guul ka gaartay kooxda Hull City, lugta hore ee afar dhammaadka League Cup… + SAWIRRO
Haaruun January 10, 2017
(Manchester) 11 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul ka gaartay naadiga Hull City oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Old Trafford lugta hore ee afar dhammaadka League Cup ama EFL Cup.
Qeybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0, inkastoo kubbad garab dhaaf ahayd ama Offside Man United birta loogu dhuftay.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee kulankan Man United ayaa la timid goolka hore waxaana kubbad dadab laga soo qaaday oo uu madaxeeyey Mkhitaryan, si wacan u dhammaystiray 56’daqiiqo Juan Mata, wiilasha Jose Mourinho ayaana kulanka ku hoggaamiyey 1-0.
Xiddiga ugu qaalisan kubadda cagta ee u safta Man United Paul Pogba ayaa kubbad laad xor ahayd (free Kick) birta ugu dhuftay Hull City, kooxda Man U ayaana ku dhawaatay inay hoggaanka ciyaarta ku qabato 2-0.
Goolka labaad ee Manchester United ayaa yimid dhammaadkii ciyaarta, waxaana 87’daqiiqo madax ugu dhaliyey Marouane Fellaini, kaddib kubbad uu soo karoosay Darmian, Man United ayaana kulankan ku adkaatay 2-0.
Man United oo ballan ka samaysatay final-ka tartankan ayaa kulanka lugta labaad booqan doonta garoonka kooxda Hull City 27 bishaan Janaayo, kulankaas oo go’aamin doona kooxdii gaari lahayd final-ka EFL Cup.
KHABAR DARAY AH: Inter Milan oo iibsatey laacibka soo baxaya ee Roberto Gagliardini
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda Hull City ee afar dhammaadka League Cup